Ụgbọ mmiri - AOOD Technology Limited
Ngwa mmiri nwere oke chọrọ nke mgbaaka mgbazinye n'ihi ọnọdụ mmiri siri ike. Ahụmịhe sara mbara nke AOOD na ọrụ mmiri na ihe ọhụrụ na-aga n'ihu na-emesi obi ike na mgbaaka AOOD nwere ike izute mkpa nnyefe ndị ahịa na-abawanye. AOOD ring ring na -arụ ọrụ ha n'ụgbọ ala mmiri, sistemụ antenna satịlaịtị nke mmiri, winches mmiri, ngwaọrụ sonar, akụrụngwa nyocha seismic na oceanographic.
Ụgbọ ala ndị na-arụ ọrụ n'ime ime obodo (ROVs) na sistemụ nkwukọrịta satịlaịtị dị ka ndị ọrụ njedebe njedebe dị mkpa na ntinye mmiri, ha na-abụkarị isi ihe na-emepe emepe AOOD. Ojiji na -eto eto nke robots n'okpuru mmiri maka ụlọ ọrụ mmanụ na gas na -akwalite mmepe nke sistemụ mgbanaka ROV. Mkpọchi ọla edo ndị a na -eji n'ime mmiri miri emi aghaghị iguzogide oke mmiri dị n'okpuru mmiri dị ka nrụgide na ujo na corrosion. AOOD enyela puku kwuruịị mgbaaka mgbaaka maka ROVs gụnyere otu ọwa ma ọ bụ ọwa abụọ mgbanaka mgbanaka elektrik maka Ethernet ma ọ bụ eriri eriri na mgbanaka elektrik dị elu. A na-eji mgbapụta nrụgide emebe mgbaaka ndị a, ejiri IP66 ma ọ bụ IP68 kaa ya, ụlọ anaghị agba nchara siri ike maka mgbochi mgbochi na gburugburu mmiri dị n'okpuru mmiri.
Sistemụ nkwukọrịta antenna satịlaịtị nwere ike ịchọpụta, nweta, na soro akara satịlaịtị, ọ dị mkpa maka nkwukọrịta mmiri site na ebumnuche gaa na ebe nleba anya dị anya. O nwere isi ihe atọ - eriri RF, njikọ RF na antenna.
Antenna bụ ihe mbụ nke sistemụ ntinye aka na sistemụ ịnata mgbaàmà ikuku, n'ihi na sistemụ antenna na -enyere nkwukọrịta ụzọ abụọ n'etiti ala na ọdụ ụgbọ ala ọzọ na -aga ngwa ngwa, mgbe ahụ ndị mmadụ nwere ike soro radar, ụgbọ elu, ịnya isi na ụgbọ ala na -aga site na ọdụ nleba anya. Ebe ọ bụ na a ga -ebugharị sistemụ antenna na ntụgharị 360 ° kwụ ọtọ ma ọ bụ vetikal, yabụ ọ chọrọ mgbanaka mmịfe iji tinye n'ime sistemụ antenna iji dozie voltaji na njikwa akara site n'otu akụkụ kwụ ọtọ ruo akụkụ rotor. AOOD coaxial rotary nkwonkwo na ngwakọ coaxial rotary nkwonkwo na mgbanaka mgbanaka eletrik nwere ike ịnye.
Ngwaahịa emetụtara: Mgbaaka mmiri mmiri